A na-emepe ebe a dị n'akụkụ osimiri Jizera. Site na Železný Brod ka Turnov, ọ na-abanye na mmiri mmiri nke miri emi nke miri emi nke Pojizeří - Ještěd-Kozákov Ridge. Ebe kachasị baa uru, ụfọdụ akụkụ ya abụrụlarị akụkụ nke netwọk nke ebe echedoro ma ọ bụ ihe odide ala dị mkpa, na-etinye aka na nza ndị a. NPP dị otú ahụ, Bučiny u Rakous, PR Ondříkovický pseudo-karst usoro. Mgbasa a gbasasịrị nke obodo na ebe obibi mejupụtara àgwà ndị dị na mpaghara a.
Klokočské Rocks bụ ebe nchekwa idobe. Mba 918 na Jičín Hills, n'ebe ọdịda anyanwụ Klokočí na Semily District na mpaghara Liberec. Mpaghara a na-elekọta site na ANCLP CR - Liberecko Office Regional. Ebe nchekwa nke uwa di n'ugwu nke Paradise Bohemian Paradise Protection Protected Landscape Area, saịtị nke Europe uru, Breakthrough Jizera nso Austria na Parahemia Paradise Geopark.
Příhrazská vrchovina dara n'okpuru Vyskeřská vrchovina ugwu na Jičín nta. Ebe kachasị elu nke ebe ahụ na 463,5 m bụ Mužský hill. Nke a kachasị elu nke mkpụrụ olivine nepheline bụ olu nke tectonic nke dị ka ọkara ọkara ruuru isi n'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ. A chọtala nke a site n'iji ihe dị elu nke elu nkume ahụ na-egbuke egbuke na mmiri nke sitere na ntọala ha. Ihe kachasị ochie nke ugwu ugwu Příhraz bụ ntọala ụlọ - ihe foduru nke ala dị larịị. Obodo nkume dị na Příhrazské Rocks gụnyere 178 Tower. Ihe ka ọtụtụ n'ime ha na-eguzo n'akụkụ ọnụ mmiri ndagwurugwu dị na isi nke shrub na tectonic. A na-ejikọta ihu n'ihu site na mpempe akwụkwọ na-adaba dị ka ebe a na-agbagharị azụ. Nnukwu ala ndị na-adịbeghị anya n'oge gara aga mere na June 1926. N'ihi ya, e bibiri obodo ukwu nke obodo Dneboh ma mebie ụzọ okporo ụzọ Olšina.